Soo dhowow | Systembolaget
Ma rabtaa shaqo xagaaga ah xilliga aad fursad u leedahay inaad isbeddel sameyso? Ma xiiseyneysaa cuntooyinka iyo cabitaanadda? Ma jeceshahay adeegista? Waxaa jira dhowr sababood oo wanaagsan oo ah sababaha ay aad u xiiso badan tahay haddana ay u adagtahay inaad nala shaqeysid.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa ah in anaga dhamaanteena oo Systembolaget joogna aan wada leenahay shaqo oo aad u muhiim ah oo aan ku faani karno oo na dhiirrigelisa. Mid kale labaad ayaa ah in cuntadda iyo cabitaanka ay ka mid yihiin waxyaabaha meesha laga helo oo aan aadka u jecelnahay. Qofka dukaanka iibiya ahaan, waxaad noqon doontaa wajiga hore ee Systembolaget.Kaalinta ugu muhiimsan ee shaqada ayaa ah in macaamiisha dhamaan la siiyo adeegista ugu fiican.
Iyadoo dareen xoog leh,xiisad leh, dadaal iyo masuuliyad shakhsiyeed leh, adiga, iyo saaxibadaada dhammaan, waxaad korey u qaadaysaan oo meel sarreeya garsiinayasaan kulanka macaamiisha.
Halkan waxaad ka heleysaa shaqooyinka xagaaga ee sanadkan!